Odayaasha Dhuusamareeb oo sheegay in laga been sheegay kulanki... | Universal Somali TV
Odayaasha Dhaqanka ee Magaalada Dhuusamareeb ayaa xalay si adag uga hadlay been abuur ay sheegeen in laga faafiyay kulankii ay shalay Magaalada Dhuusamareeb kula yeesheen Taliyaha Guutada 15aad ee Qaybta 21aad ee Ciidanka Xoogga Dalka, General Mascuud Maxamed Warsame.
Warbaahinta qaybteeda ayaa ku warantay in kulankaasi looga hadlay khilaafka ka dhashay amarkii ka soo baxay Madaxweynaha Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor), ee ahaa in General Mascuud Maxamed Warsame uu soo wareejiyo hubkii Ahlu Sunada Gobolada Dhexe. Sidoo kale dadka barraha bulshada wax ku qora ayaa sheegay in kulanka si dhow looga hadlay xiisadda ka dhalatay hubkii Ahlu Sunna ee la amray in lagu wareejiyo Wasaaradda Amniga Galmudug.
Ugaas Xasan Ugaas Maxamed Ugaas Nuur iyo odayaal kale oo xalay shir jaraa'id ku qabtay Magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegay inaanan kulanka looga hadlin haba yaraatee wax la xiriira arrimaha hubka.
Ugaas Xasan Ugaas Maxamed ayaa tilmaamay in kulanka uu ahaa mid looga hadlayay Galmudug iyo horumarinteeda, isla-markaana uu reer Galmudug u sheegayo in warka laga faafiyay uu yahay mid xaqiiqda ka fog.
Odayaashii kale ee goobta ka hadlay ayaa sheegay in dadka been abuurka faafiyay ay halis geliyeen jiritaanka Galmudug, isla-markaana ay ku baaqayaan in gacanta lagu soo dhigo, sharcigana la horkeeno.
Dhanka kale General Mascuud Maxamed Warsame, Taliyaha Guutada 15aad ee Qaybta 21aad ee Ciidanka Xoogga Dalka waa Sarkaalkii, Madaxda Ahlu Sunna ku qanciyay inay joojiyaan dagaalkii daba-yaaqadii bishii February ka dhacay Magaalada Dhuusamareeb, waxaana xilligaa uu ugu baaqay inay hubka ku soo wareejiyaan, isaguna uu hayn doono, maadaama sida la sheegay inay hubkaasi leeyihiin beelaha deegaanka.
Taliye Mascuud ayaa iska diiday amarka uga yimid Madaxweyne Qoorqoor ee la xiriiray wareejinta hubkaasi, sababo ku aadan isagoo ku andacoonaya in hubkaasi uu yahay mid ay leeyihiin beelaha deegaanka, oo aanu ahayn hub dowladeed, haddii ay noqoto in hubka la wareejiyana marka hore in hubka laga soo wada qaado beelaha kale ee degga Galmudug.
General Mascuud waxa uu ka mid yahay Saraakiishii Ciidamada Ahlu Sunna ee la qarameeyay, laguna biiriyay Taliska Qaybta 21aad ee Ciidanka Xoogga Dalka, ka hor intii aanay Dowladda Somaliya la wareegin gacan ku haynta Magaalada Dhuusamareeb, bishii November ee sanadkii hore.
Kan-xigaCumar Filish oo amray in la xoojiyo a...
Kan-horeGolaha Shacabka oo maanta ka doodaya ...
55,776,052 unique visits